Amahhotela aseHawaii: Imali engenayo ngoDisemba, isilinganiso sansuku zonke, nokuhlala kwehle kakhulu
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha zaseHawaii » Amahhotela aseHawaii: Imali engenayo ngoDisemba, isilinganiso sansuku zonke, nokuhlala kwehle kakhulu
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba Ezintsha zaseHawaii • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
Ngenyanga edlule imali engenayo yamahhotela aseHawaii ezweni lonke yehle ngamaphesenti angama-77.2 yaya ezigidini ezingama-107.9, yehla isuka ku- $ 472.6 million ngoDisemba 2019
NgoDisemba 2020, amahhotela aseHawaii ezweni lonke abike ukwehla okukhulu kwemali engenayo ngekamelo ngalinye elitholakalayo (i-RevPAR), isilinganiso sansuku zonke (ADR), nokuhlala kuqhathaniswa noDisemba 2019 njengoba ezokuvakasha ziqhubeka nokuthinteka kakhulu ngubhadane lwe-COVID-19.
NgokweHawaii Hotel Performance Report eshicilelwe yi I-Hawaii Tourism Authority's (i-HTA) Uphiko Lwezocwaningo, i-RevPAR yezwe lonke yehle yaya ku- $ 69 (-75.6%), i-ADR yehlela ku- $ 291 (-17.6%), kanti ukuhlala kwehle kwaba ngamaphesenti angama-23.8 (-56.4 amaphesenti wamaphesenti) ngoDisemba. Okutholwe yilo mbiko kusebenzise imininingwane eyenziwe yi-STR, Inc., eqhuba ucwaningo olukhulu kunawo lonke nolunzulu kakhulu lwezakhiwo zamahhotela eziqhingini zaseHawaii.
Kusuka ngo-Okthoba 15, abagibeli abafika bevela ngaphandle kwezwe futhi behamba phakathi kwe-county bangadlula amandla okuzibophezela okuzimele wezinsuku eziyi-14 nge-negative esebenzayo Covid-19 Umphumela wokuhlolwa kwe-NAAT ovela ku-Trusted Testing and Travel Partner ngohlelo lukahulumeni lwe-Safe Travels. Kusukela ngomhlaka-24 Novemba, bonke abahambi be-trans-Pacific ababambe iqhaza ohlelweni lokuhlola ngaphambi kokuvakasha kwakudingeka ukuthi babe nemiphumela yokuhlolwa engemihle ngaphambi kokuya kwabo eHawaii, futhi imiphumela yokuhlolwa ngeke isamukelwa uma isihambi sifikile eziqhingini zaseHawaii. NgoDisemba 2, iKauai County yamisa okwesikhashana ukuzibandakanya kwayo ohlelweni lukahulumeni lwe-Safe Travels, okwenza kwaba yisibopho kubo bonke abahamba eKauai ukuyohlukaniswa lapho befika. NgoDisemba 10, ukuhlukaniswa okugunyaziwe kwehliswa kusuka ezinsukwini eziyi-14 kuya kwezingu-10 ngokuya ngemikhombandlela ye-US Centers for Disease Control and Prevention. Izifunda zaseHawaii, iMaui neKalawao (Molokai) nazo zazihlukaniswa ingxenye ethile ngoDisemba.
Ngenyanga edlule imali engenayo yamahhotela aseHawaii ezweni lonke yehle ngamaphesenti angama-77.2 yaya ezigidini ezingama- $ 107.9, yehla isuka ku- $ 472.6 million ngoDisemba 2019. Isidingo segumbi besingaphansi ngamaphesenti angama-72.3 kunesikhathi esifanayo ngonyaka owedlule. Ukuhlinzekwa kwamakamelo bekungamaphesenti ayi-6.6 kuphela aphansi unyaka nonyaka njengoba izakhiwo beziqhubeka nokubuyisa amakamelo enkonzweni. Izindawo eziningi ezivale noma ezinciphise ukusebenza kusukela ngo-Ephreli zivulwe kabusha noma zavulwa kancane ngoDisemba. Uma indawo yokuhlala ngoDisemba 2020 ibalwa ngokususelwa ekunikezelweni kwegumbi kusuka ngoDisemba 2019, ukuhlala kuzoba ngamaphesenti angama-22.2 ngenyanga.
Onke amakilasi ezindawo zehhotela laseHawaii ezweni lonke aqhubeka nokubika ukulahleka kwe-RevPAR ngoDisemba uma kuqhathaniswa nonyaka odlule. Izakhiwo ze-Luxury Class zithole i-RevPAR engu- $ 168 (-71.1%), i-ADR ingama- $ 865 (+ 8.9%) kanye nokuhlala ngamaphesenti ayi-19.5 (-54.0 percent points). Izakhiwo zeMidscale & Economy Class zithole i-RevPAR engu- $ 58 (-66.6%), nge-ADR ku- $ 196 (-6.9%) nokuhlala amaphesenti angama-29.6 (-52.8 pesenti amaphuzu).
Zonke izifunda zeziqhingi ezine zaseHawaii zibike i-RevPAR ephansi nokuhlala kuyo. Amahhotela kaMaui County ahole umbuso ku-RevPAR, athola u- $ 130 (-68.5%), nge-ADR ngo- $ 501 (-7.4%) nokuhlala amaphesenti angama-26.0 (-50.5 amaphuzu wamaphesenti). Indawo yokunethezeka yaseWailea ithole u- $ 218 (-71.4%) e-RevPAR, nge-ADR ku- $ 834 (-6.3%) nokuhlala amaphesenti angama-26.1 (-amaphesenti angama-59.3).
Amahhotela ase-Oahu athola i-RevPAR yama- $ 43 (-81.8%) ngoDisemba, i-ADR ingama- $ 184 (-36.0%) nokuhlala amaphesenti angama-23.6 (-59.5% amaphuzu). Amahhotela aseWaikiki athola ama- $ 40 (-82.7%) ku-RevPAR nge-ADR ngo- $ 182 (-35.1%) nokuhlala ngamaphesenti angama-22.3 (-61.2 amaphuzu wamaphesenti).
Amahhotela esiqhingini saseHawaii abike i-RevPAR yama- $ 88 (-66.2%), i-ADR ingama- $ 329 (+ 0.1%) nokuhlala amaphesenti angama-26.8 (-52.7 pesenti amaphuzu). Amahhotela aseKohala Coast athola u- $ 146 ngoDisemba i-RevPAR (-62.6%), i-ADR ingama- $ 542 (+ 10.2%) kanye nokuhlala ngamaphesenti angama-26.8 (-52.2 amaphuzu wamaphesenti).
Amahhotela akwaKauai athola i-RevPAR yama- $ 24 (-90.3%) ngoDisemba, i-ADR ingama- $ 178 (-47.9%) nokuhlala amaphesenti ayi-13.4 (-58.7 amaphesenti wamaphesenti).
Unyaka Nosuku December 2020
Ukusebenza kwehhotela laseHawaii ngo-2020 kwaba nomthelela omubi wubhubhane lwe-COVID-19. Inothi, i-2019 ibingunyaka wesibhengezo embonini yamahhotela eHawaii kanti u-2020 waqala ngalokhu kuqhubeka. Kodwa-ke, kuze kube yimanje, amahhotela aseHawaii athola u- $ 99 ku-RevPAR (-56.6%), okungaphansi kwengxenye ye- $ 229 RevPAR ebikiwe ngo-2019. I-ADR yehle yaya ku- $ 267 (-5.5%) kanti indawo yokuhlala yehle yaba ngamaphesenti angama-37.1 (- Amaphesenti angama-43.7).
Ingqikithi yemali engenayo yamahhotela ezweni lonke ngo-2020 yayingu- $ 1.4 billion (-69.0%) uma iqhathaniswa ne- $ 4.5 billion ngo-2019. Izindawo eziningi zavala noma zanciphisa ukuthengwa kwazo kusukela ngo-Ephreli 2020, futhi zaqala ukuvulwa ekwindla. Lokhu kuholele ekutholakaleni kwegumbi lonyaka kubusuku obungu-14.1 wezigidi zamakamelo, kwehle ngamaphesenti angama-28.5 kusuka ngo-2019. Isidingo segumbi kwaba ubusuku bamakamelo ayizigidi eziyi-5.2, kwehla ngamaphesenti angama-67.2 unyaka nonyaka.
Ukuqhathanisa nezimakethe eziphezulu zase-US
Uma kuqhathaniswa nezimakethe eziphezulu zase-US ngonyaka we-2020, iziQhingi zaseHawaii zathola i-RevPAR ephezulu kakhulu ngama- $ 99 kulandelwa imakethe yaseMiami / Hialeah ngo- $ 87 (-41.4%) naseSan Francisco / San Mateo ngo- $ 74 (-64.0%). IHawaii iphinde yahola izimakethe zase-US e-ADR ngo- $ 267 kwalandela iMiami / Hialeah ($ 188, -4.1%) neSan Francisco / San Mateo ($ 177, -29.2%).
Njengoba i-US Mainland ifinyeleleka ngohambo lomgwaqo nezindiza ezihamba isikhashana ezihamba phakathi kwamazwekazi, ukuhlala kweziQhingi zaseHawaii '2020 kwaqhathaniswa uma kuqhathaniswa nezimakethe eziphezulu ze-25 ze-STR; ukufika endaweni yama-21 (Umdwebo 22). I-Tampa / St. I-Petersburg, eFlorida yahamba phambili ezweni ngo-2020 ihlala ngamaphesenti angama-50.8 (-21.3 amaphesenti amaphuzu), ilandelwa yiPhoenix, Arizona (49.8%, -20.7 phuzu amaphuzu) neNorfolk / Virginia Beach, Virginia (49.1%, -14.4 amaphesenti amaphuzu).
Ukuqhathanisa Nezimakethe Zamazwe Ngamazwe
Uma kuqhathaniswa nezindawo zomhlaba "zelanga nolwandle", izifunda zaseHawaii zazisengxenyeni engenhla yeqembu le-RevPAR unyaka nonyaka. Amahhotela aseMaldives akleliswe phezulu kakhulu e-RevPAR ngo- $ 250 (-30.3%) alandelwa yiFrench Polynesia ($ 245, -37.6%) neMaui County ($ 140, -54.9%). Isiqhingi saseHawaii, iKauai, ne-Oahu sikleliswe endaweni yesithupha, yesikhombisa, neyesishiyagalombili ngokulandelana.
IMaldives iholele ku-ADR ngo- $ 782 (+ 42.8%) ngo-2020, ilandelwa yiFrench Polynesia ($ 579, + 2.3%) neMaui County ($ 414, + 3.3%). IKauai, isiqhingi saseHawaii, ne-Oahu kukleliswe endaweni yesithupha, yesikhombisa, neyesishiyagalombili ngokulandelana. IFrench Polynesia iholele ku-2020 ukuhlala kwelanga nolwandle (ama-42.3%, -27.0 amaphesenti wamaphesenti), kwalandelwa u-Oahu (39.0%, -45.1 amaphesenti amaphuzu) kanye nesifunda sePuerto Vallarta (38.7%, -28.4 amaphesenti amaphuzu). Isiqhingi saseHawaii, iMaui County, neKauai sikleliswe endaweni yesine, yesithupha neyesishiyagalolunye, ngokulandelana.